Qarax Ka Dhacay Degmada Bardaale Ee Gobalka Baay. – Bogga Calamada.com
Qarax Ka Dhacay Degmada Bardaale Ee Gobalka Baay.
October 22, 2017 6:41 am Views: 120
Wararka ka imaanaya degmada Bardaale ee gobalka Baay waxey sheegayaan in qeybo ka mid ah degmadaasi qarax lagula beegsaday maleeshiyaatka Murtadiinta ee Kabo qaadka u ah ciidamada Xabashida Itoobiya ee duulaanka ku jooga qeybo ka mid ah Konfurta iyo bartamaha dalka Somalia.
Qaraxa waxaa loo adeegsaday Miinada dhulka lagu aaso ee meelaha fog laga hago waxaa lagu aasay goob ay maalin walbo fadhiistaan oo ay ku qayilaan maleeshiyaatka maamulka Shariif Sakiin ee ku sugan degmadaasi.
Goob-joogayaal ka agdhawaa goobta qaraxa ayaa xaqiijiyay iney jiraan tiro askar ah oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaraxa,dhawaaqa jugta miinada waxaa si aad ah looga maqlay degmada iyo duleedkeeda.
Qaraxan miino ayaa kusoo aadaya xilli saacadihii lasoo dhaafay qarax Bam lagu weeraray maleeshiyaat ka tirsan maamulka Farmaajo oo ku sugnaay xaafada Siisii ee magaalada Muqdisho.